ဈေးနှုန်းသက်သာသော တရုတ်လက်ကား Polycrystalline Solar PV - Rixing Electronics
Cixi City Rixing Electronics Co., Ltd. သည် လှပသော Hangzhou ပင်လယ်အော်၊ Zheijiang ပြည်နယ်၊ Cixi City၊ မှတ်ပုံတင်ထားသော မတည်ရင်းနှီးငွေမှာ ယွမ် သန်း ၂၀ ဖြစ်သည်။ Rixing သည် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဆန်းသစ်တီထွင်မှုကို အားကြိုးမာန်တက်အကောင်အထည်ဖော်ကာ အဆင့်မြင့် အလိုအလျောက်ထုတ်လုပ်သည့် စက်ကိရိယာများနှင့် နည်းပညာများစွာကို ယူဆောင်လာသည့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် Polycrystalline solar PV ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ဆိုလာ PV ၏ ထုတ်လုပ်မှု စွမ်းရည်သည် 2017 ခုနှစ်တွင် 500MW သို့ရောက်ရှိပြီး၊ ဂျာမနီ၊ စပိန်၊ အီတလီ၊ ပြင်သစ်၊ ကနေဒါ၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊ အာရှနှင့် အခြားသော နိုင်ငံများသို့ TUV ETL CE IEC CQC ISO9001 HOSAS8001 နှင့် IECEE စသည်တို့ကဲ့သို့ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များဖြင့် တင်ပို့လျက်ရှိသည်။
Polycrystalline solar PV ၏ အားသာချက်များကား အဘယ်နည်း။
1. လက်ရှိ အမျိုးအစားခွဲခြင်းသည် မကိုက်ညီသော ဆုံးရှုံးမှုကို လျှော့ချပါ။
2. Low hot spot temperature မြင့်မားသော ဘေးကင်းမှု စွမ်းဆောင်ရည်။
3. အရိပ်များအောက်တွင် ပါဝါဆုံးရှုံးမှုနည်းပါးခြင်း။
4. 5BB သည် module အတွင်းဘက်ထရီ၏လက်ရှိအပူဆုံးရှုံးမှုကိုလျှော့ချပေးသည်၊ လှပသောအသွင်အပြင်၊ အမိုးတပ်ဆင်မှုအတွက်ပိုမိုသင့်လျော်သည်။
Polycrystalline solar PV ၏ အရည်အသွေးဆိုင်ရာ ပြဿနာများနှင့် ပတ်သက်၍၊ သင်သည် ကြီးကြီးမားမား ပျက်ကွက်မှုအတွက် အစားထိုး သို့မဟုတ် ပြန်အမ်းငွေနှင့် အခြား ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ ခန့်မှန်းနိုင်သော ဆုံးရှုံးနိုင်မှု သို့မဟုတ် ပျက်စီးမှုများအတွက် လျော်ကြေးငွေအတွက် ခံစားခွင့်ရှိသည်။ ကုန်ပစ္စည်းသည် လက်ခံနိုင်သော အရည်အသွေးမပြည့်မီပါက ကုန်ပစ္စည်းကို ပြုပြင်ခြင်း သို့မဟုတ် အစားထိုးခြင်းကိုလည်း ခံစားခွင့်ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုကို ထောက်ခံပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Polycrystalline solar PV သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးကို ပျံ့နှံ့နိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
Rixing Electronics သည် စတော့တွင်ရရှိနိုင်သော Polycrystalline ဆိုလာ PV ကို အဓိကအားဖြင့် ထုတ်လုပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Polycrystalline ဆိုလာ PV ထုတ်လုပ်သူနှင့် ပေးသွင်းသူများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သော 31 နှစ်ကစတင်တည်ထောင်ကတည်းက၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်များကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည် တရုတ်နိုင်ငံတွင်ဖြစ်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံမှ ထုတ်လုပ်သော ထုတ်ကုန်များသည် စျေးသက်သက်သာသာသာမက တာရှည်ခံပြီး ထိရောက်မှုလည်းရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် CE နှင့် TUV အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိထားပြီး 25 နှစ်အာမခံပါရှိပြီးအရည်အသွေးကိုအာမခံပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် grid photovoltaic စနစ်များနှင့် grid photovoltaic စနစ်များကို လက်ကား သို့မဟုတ် အစုလိုက် ဝယ်ယူပါက၊ သင့်အား စျေးနှုန်းချိုသာစွာ ပေးနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည် နောက်ဆုံးပေါ်ရောင်းအား၊ အဆင့်မြင့်ပြီး သန့်ရှင်းသောစွမ်းအင်နှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုလည်း စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ပြီး သင့်အား စျေးနှုန်းစာရင်းတစ်ခုပေးပါမည်။